Abbaan Alangaa Federaalaa Itiyoopiyaa Qabeenyaan Namoota Himatee Haa Dhaalamu Jedhe
Kamisa, Guraandhalaa 11, 2016 Local time: 22:04
Abbaan alangaa Federaalaa Itiyoopiyaa namoota shororkeessummaa fi himannaa biyya ganiinsaan xumura waggaa darbee himate 24 keessaa qabeenyaan namoota sadii akka dhaalamu mana murtiif gaaffii dhiyeessee jira.
Qabeenyaan obbo Andualem Araagee, kan Iskindir Negga fi obbo Abbebee Belew akka dhaalaman abbaan alangaa dursee gaafatu iyyuu manni murtii federaalaa dhaddachi sadaffaan qabeenyaa gaaffiin irratti dhiyaate irraa dantaa qabna, mirga keenya kanneen jedhan yoo jiraatan akka dhiyaatan beellamee ture.
Akkuma kanaan manni murtichaa qabeenyaa obbo Iskindirii fi kan obbo Abbebee gama ilaaleen namoota dhimmi isaa nu galcha jedhuuf abbaan alangaa akka dhiyaatan xalayaa ittiin ga’uu gaafatee jira. Abbaan alangaas namoota sana kan hin arganne ta’uu isaa ibsee jira.
Abukaatoon obbo Andualem obbo Deribew Temesgen VOAf akka ibsanitti haati warraa obbo Andualem Dr. Selam Aschaalee dhimma kana ilaalchisee mana murtiif yaada qaban ibsaniiru. karaa Abukaatoo isaanii ibsa kennaniin himannan abbaa warraa isaanii irratti dhiyaate qabeenyaa isaa waliin kan wal qabate miti. Manni murtii gad aanaa murtiin kenne mana murtii ol aanaatti waan iyyateef xmura hin argatn jira.
Manni murtichaa sababaalee kana hin simatu yoo ta’es mirga haadha warraa fi ijoollee isaa akka nuuf eegu gaafannaa jedhee jira. Manni murtichaas yaada gama maraa dhaggeeffachuuf sadaasa 28 bara 2005 beellama ka biroo kennee jira.
Most ViewedHiriira Jalduu fi Bulee Horaa, Deebii Angawaa GujiiHiriirawwan Har’aa Oromiyaa Keessaa fi Tarkaanfii Humnoonni Mootummaa Fudhatan, JedhameAngawoonni magaalaa Adaree fi kan Bulee Horaa maal jedhu? Walisoon maal keessa turte?KFO: Ajjeechaa Oromiyaa Keessatti Geggeessame Ka Qoratu Qaamni Walabni Hundeessamuu QabaHiriira Godina Gujii fi Arsii Lixaa Akkasumas Dhohiinsa Bombii Magaalaa WalisooMost Listened Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Guutummaa gabaasaa kanaa dhaggeeffadhaa Guutummaa qophii keenyaa dhaggeeffadhaa Gabaasni sagalee kunooti